भेदभाव’bout रिपोर्ट गर्नुहोस् – Fair Housing Partnership
भेदभाव’bout रिपोर्ट गर्नुहोस्1258FairHousingProject252020-11-16T06:40:47-05:00
के तपाईं आफूलाई हाउजिङ भेदभावको पीडित भएको महसुस गर्नुहुन्छ ? FHP ले हाउजिङ भेदभावका आरोपहरूको छानबिन गर्छ । उजुरी बुझाउनका लागि कृपया तलको लिङ्क छनौट गर्नुहोस् र हाम्रो कर्मचारीले तपाईंको उजुरीका ’boutमा तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछन् । बेनामी उजुरी दायर गर्न वा कर्मचारीसँग कुरा गर्नका लागि कृपया 412-391-2535 मा फोन गर्नुहोस् ।
Report Discrimination Fields NE
भेदभावमा परेका व्यक्ति:
नाम तथा थर *
राज्य/प्रान्त	 Alabama	Alaska	Arkansas	Arizona	California	Colorado	Connecticut	Delaware	District of Columbia	Florida	Georgia	Hawaii	Idaho	Illinois	Indiana	Iowa	Kansas	Kentucky	Louisiana	Maine	Maryland	Massachusetts	Michigan	Minnesota	Mississippi	Missouri	Montana	Nebraska	Nevada	New Hampshire	New Jersey	New Mexico	New York	North Carolina	North Dakota	Ohio	Oklahoma	Oregon	Pennsylvania	Rhode Island	South Carolina	South Dakota	Tennessee	Texas	Utah	Vermont	Virginia	Washington	West Virginia	Wisconsin	Wyoming
घरपरिवारको आय: आयको श्रेणीलाई छनौट गर्नुहोस् * $0-$23,559	$23,560-$38,759	$38,760-$61,559	$61,560 and above
के तपाईं अर्को व्यक्तिको तर्फबाट भेदभावको रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ No	Yes
तपाईंको पहिलो र अन्तिम नाम बताउनुहोस्
भेदभाव गरिएको व्यक्तिलाई तपाईंको सम्बन्ध बताउनुहोस्
तपाईको फोन नम्बर बताउनुहोस्
तपाईको इ-मेल ठेगाना बताउनुहोस्
कुन संरक्षित वर्ग(हरू) मा भेदभाव आधारित थियो:
कुन संरक्षित वर्ग(हरू) मा भेदभाव आधारित थियो: *
लैङ्गिक पहिचान वा अभिव्यक्ति
घरेलु हिंसाबाट जोगिएका पीडितहरू
लागू हुने सबै छनौट गर्नुहोस्
नाबालिग उमेरका बच्चाहरूको उमेर
तपाईंको अक्षमताले तपाईंको दैनिक जीवनमा कसरी प्रभाव पार्दछ बताउनुहोस्।
हाउजिङ भेदभावको कार्य(हरू) गर्ने हाउजिङ प्रदायक
हाउजिङ भेदभावको कार्य:
हाउजिङ भेदभावको सबैभन्दा पछिल्लो कार्य भएको मिति *
हाउजिङ भेदभावको कार्यलाई वर्णन गर्नुहोस् । *
चिठ्ठी, इमेल, टेक्स्ट, बिल, भ्वाइसमेलहरू इत्यादि जस्ता तपाईंसँग भएका सबै प्रमाणहरूको सूची दिनुहोस्...
फेयर हाउजिङ पार्टनरशिपका बारेमा तपाईंले कसरी थाहा पाउनुभयो ? * अनलाइन खोज	विज्ञापन	सामाजिक सञ्जाल	सामाजिक सेवाको रेफरल	साथीभाइ/परिवार	पूर्व FHP सेवाग्राही	FHP कार्यक्रम/प्रस्तुति	अन्य	 फेयर हाउजिङ पार्टनरशिपका बारेमा तपाईंले कसरी थाहा पाउनुभयो ?
फाराम बुझाइसकेपछि सो जानकारीलाई FHP का कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ जसले तपाईंको मुद्दाको समीक्षा गर्नेछन् । FHP को इन्टेक कर्मचारीद्वारा गरिने फलोअप सम्पर्कका लागि कृपया3कार्यालय दिनको समय दिनुहोस् ।